Cheap mpempe akwụkwọ metal akụkụ zọ factory na suppliers | Ouzhan
Ihe ndi mmadu eji eme ihe bu ihe ndi ozo bu: ígwè nchara, igwe nchara, tinplate, igwe mmiri, ọla kọpa na ọla kọpa, ihe magnesium alloy, alloy alloy aluminium oyi, efere ọkụ akpọrọ, efere kpaliri, efere electrolytic, efere aluminom, igwe anaghị agba nchara efere ọla kọpa.
Mpempe akwụkwọ metal machining zọ usoro-ahaziri nkenke mpempe akwụkwọ metal akụkụ
N'ikwu okwu n'ozuzu, akụrụngwa akụrụngwa gụnyere Igwe Shear, CNC Punching Machine / Laser, Plasma, Waterjet Cutting Machine, Bending Machine, na ngwa inyeaka dị iche iche dịka: Uncoiling Machine, machine leveling, deburring machine, spot welding igwe, wdg Ouzhan nwere ndị a zuru ezu akụrụngwa na usoro ntinye zuru ezu. Nye gị ọkachamara ọkachamara ahaziri ọrụ.
Uru nke Ouzhan mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ
- Usoro stampụ nwere ike nweta ihe eji arụ ọrụ nwere ọdịdị dị mgbagwoju anya ma sie ike nrụpụta site na usoro ndị ọzọ, dị ka akụkụ dị mkpụmkpụ. The akụkụ ziri ezi nke oyi zọ akụkụ na-ekwe nkwa site ebu, otú akụkụ akụkụ kwụsie ike dị mma na ndịrịta ibe dị mma.
- High ihe itinye n'ọrụ ọnụego, ìhè arọ, ezi rigidity na elu ike nke workpiece, na ala oriri ike na zọ usoro, otú usoro ulo oru mbo ke nnukwu quantities bụ ala.
- Mfe ọrụ, obere ọrụ ike, mfe ịghọta mechanization na akpaaka.
- The ebu Ọdịdị na-eji na zọọ usoro bụ n'ozuzu ọzọ mgbagwoju anya, na mmepe okirikiri bụ ogologo na ulo oru mbo dị elu.
Ouzhan OEM ahaziri mpempe akwụkwọ metal zọ ọrụ-China Shanghai mpempe akwụkwọ metal zọ akụkụ emeputa
Ouzhan bụ onye nrụpụta na - agbakwunye ụlọ ọrụ na azụmaahịa, na - enye ọrụ ndozi ntụgharị na igwe nhazi igwe. Dị ka ndị ahịa chọrọ, elu-nkenke mpempe akwụkwọ metal zọ akụkụ igwe anaghị agba nchara na mụ na a pụrụ ịdabere na àgwà nwere ike esichara. A na-arụpụta akụkụ igwe ndị a site na iji akụrụngwa kachasị mma, nke a na-enweta site na ndị na-ebubata ngwa ahịa a ma ama. Anyị ike na ọkachamara oru otu na oru oma management na ime ihe na usoro nwere ike hụ na zuru okè n'ichepụta nke mpempe akwụkwọ metal zọ ígwè akụkụ. Tụkwasị na nke ahụ, ngwaahịa ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-agbaso ụkpụrụ dị elu ma nwee ike iji ya rụọ ọrụ dị iche iche. Na anyị nwere ike inye mpi ọrụ maka mpempe akwụkwọ metal zọ na zọ ngwaahịa anyị kpọrọ ahịa.
Ngwa ebe nke mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ
1. Mpempe akwụkwọ metal zọ automotive akụkụ: tumadi na-agụnye akpakanamde bughi akụkụ, akpakanamde ọtọ akụkụ, akpakanamde lathe akụkụ, akpakanamde relays, wdg
2. Mpempe akwụkwọ metal zọ electronic akụkụ: tumadi na-agụnye njikọ ngwaọrụ, njikọta, ahịhịa akụkụ, eletriki ọnụ, na-agbanwe akụkụ, wdg
3. Mpempe akwụkwọ metal zọ n'ụlọ ngwa oru akụkụ: Tumadi na-agụnye isi n'ụlọ ngwa akụkụ, dị ka agba tube elektrọn akụkụ, na obere ụlọ ngwa akụkụ, iche iche bughi akụkụ na ọtọ akụkụ.
4. IC ike circuit ebute etiti: tumadi na-agụnye pụrụ iche ngwaọrụ ụzọ etiti na integrated circuit edu etiti, wdg
5. Mpempe akwụkwọ metal zọ moto isi: tumadi na-agụnye otu-adọ usoro moto isi, otu-adọ ezinụlọ moto isi, otu-adọ shaded poolu moto isi, na-adịgide adịgide ndọta DC moto isi, ulo oru moto isi, na plastic stator isi na-eche.
6. Mpempe akwụkwọ metal zọ eletriki igwe cores: tumadi na-agụnye E-ekara transformer cores, E-ekara transformer cores, I-ekara transformer cores, na ndị ọzọ na transformer isi ibe.
7. Mpempe akwụkwọ metal zọ okpomọkụ Exchars nku: tumadi na-agụnye ulo oru okpomọkụ Exchains nku, ezinụlọ okpomọkụ Exchanger nku, na ụgbọala okpomọkụ Exchain nku.
8. Mpempe akwụkwọ metal stamping na akụkụ ndị ọzọ: tumadi na-agụnye instrumentation akụkụ, IT akụkụ, now na igwefoto akụkụ, oge a na ụlọ ọrụ akụkụ, na kwa ụbọchị ngwaike.
Gịnị bụ ojiji nke mpempe akwụkwọ metal zọ akụkụ
1. Akụkụ kwa ụbọchị na ngwaike stampụ: ihe ndị dị mkpa kwa ụbọchị dịka ite na ite, ite mmiri, ihe oriri, na ngwa ụlọ dịka igwe ncha, ntụ oyi, friji, na osikapa;
2. Industrial metal zọ akụkụ: akụrụngwa Chassis shei, ụgbọala mpempe akwụkwọ metal na injinịa ígwè zọ akụkụ;
3. Stamping ngwaike nke kọmpat akụkụ: instrumentation akụkụ, njikọ, wdg;
4. Ngwongwo stampụ pụrụ iche maka ụgbọelu, ụgbọ mmiri na ụgbọ mmiri.
Uru nke Ouzhan mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ
-High mmepụta ikike na asọmpi ego.
-Nke niile nkenke mpempe akwụkwọ metal zọ akụkụ ngwaahịa na-n'okpuru nlezianya mma nnyocha.
- Dị ka Eserese ma ọ bụ n'omume Nlụpụta nkenke mpempe akwụkwọ metal zọ akụkụ.
Nke gara aga: Mpempe akwụkwọ metal akụkụ polishing akụkụ
Osote: Omenala mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ
Nhicha aluminum alloy ụzọ na window usoro ...
6016 aluminum alloy okpomọkụ ọgwụgwọ CNC machinin ...